Heritage : Qatar iyo xulufada Sucuudiga keebaa u wanaagsan Soomaaliya? - BBC News Somali
Image caption Madaxweyne Farmaajo oo la qoslaya amiirka Qatar
"Taas waxa ay jabisay qabkii ama isla qabweyninkii Soomaalida, xukunkii kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre kama uusan soo kabsan dhibaatadii kasoo gaartay dagaalkii Itoobiya" ayaa lagu yiri daraasadda.
"Qudha 40 sano kadib xilligaas, taariikhda ayaa u muuqata in ay markale dib ugu laabanaysa halkii, balse markan waa ay kasii walwal badantahay" ayay daraasadda intaas ku dartay.
Daraasadda ayaa aad loogu lafo gurey in go'aankii dhexdhexaadnimada ee ay Soomaaliya ka qaadatay khilaafka dalalka Carabta ee xulufada Sucuudiga oo dhinac ah iyo Qatar oo dhinac.
"Xitaa booqashooyinkii madaxweyne Farmaajo iyo Ra'isulwasaare Xasan Cali Kheyre ay ku tageen Riyadh iyo Dubai ma aysan soo hagaajin xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo dalalkaas" ayaa lagu yiri daraasadda Heritage, oo intaas ku dartay in Sucuudiga uu Soomaaliya dib ugu soo celiyay 27 kun oo ari ah, xilli lagu dhowyahay munaasabadda Ciidda Carafada oo xoolaha la qalo.
Waxaa xusid mudan in tallaabada Sucuudiga ay kusoo hagaagtay maalmo uun kadib markii dowladda Soomaaliya ay la safatay Sucuudiga markii ay is qabteen Canada, go'aankaas oo daraasadda ay ku tilmaamtay mid uu degdeg badan ka muuqday.
Tan koowaad waa in siyaasadda arrimaha dibedda lagu dhiso wax loogu yeeray 'dublamaasiyadda ganacsiga' taas oo ah in go'aamada lagu saleeyo hadba danaha ganacsi ee Soomaaliya.